Jiri ngwa Google gwuo nke gi nke mbu Martech Zone
Wenezde, August 22, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'abalị a, ekpebiri m ezumike ma ka chọrọ itinye m pizazz na m ọrụ ọhụrụ. Ọ bụ a obere ìgwè na m na-arụ ọrụ na ma ọ bụ mara mma mma otú na-emeghe ka technology ha na-. Ozugbo m batara, ebufere m obere ihe edere na Google Docs. Ọ bụ nnukwu njem ebe ọ bụ na anyị nwere akụ na ụsọ mmiri. Ugbu a, anyị niile nwere otu akwụkwọ ahụ nwere mmelite ndị kachasị ọhụrụ - ọfụma karịa.
Otu enyi m Bill jụrụ m ihe kpatara na anaghị m ada Ngwa Google. O kwuru na enyi ya ọzọ, Dale, ejirila ya rụọ ọrụ nwunye ya ma ha hụrụ ya n'anya. Ya mere n'abalị a, m mere ya na ya. Ọ bụ obere clunky, ma ọ nwere ike na-arụ ọrụ… Aga m anọgide na-eleru ya na-ahụ.
Emere m otu ihe dị mma n'abalị a, n'agbanyeghị. Ngwa Google na-enye gị ohere ị wulite peeji nke mmalite ahaziri yana ọbụlagodi na-enye gị DNS ntọala na ihe omume ị chọrọ iwu ya ozugbo na saịtị gị! Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịme ibe ahụ http://start.yoursite.com! N'abalị a ka m wuru Patronpath Start Page:
Offọdụ n'ime atụmatụ:
Anyị logo na ika na agba mma na peeji nke.
Ekpochiri ọdịnaya na kọlụm aka ekpe nke gụnyere Kalinda ndị nkịtị, ihu igwe mpaghara, yana n'ezie, nri nri nke National Restaurant Association!
Enwere ike ịhazi ogidi 2 aka nri ọ bụla mmadụ ga-achọ, dị ka iGoogle.
Kwụ nwere ụfọdụ njikọ njikọta na ya na weebụsaịtị anyị.
Ọ bụghị nnukwu ma ọ bụ splashy, mana maka nkeji ole na ole igwu egwu na ngwa ọrụ n'efu, ọ dị jụụ!
Ndi Social Media Nwere Ike Depda Mbibi?
Aug 27, 2007 na 9:41 PM
Ọ dị jụụ. M Mbido ihe a ọnwa ole na ole gara aga 🙂
Sep 10, 2007 na 10: 03 AM
Ọ ga-amasị m ịkwado onye ọ bụla. M na-eji peejiflakes iji jikwaa ọtụtụ adreesị email ma denye aha na blọọgụ 30. Ọ na-eme ka ọ dị mfe!